Dufcaddii 9aad ee Jaamacadda Hargeysa oo munaasibad qalin-jebin ah loo sameeyay | Somalidiasporanews.com
Dufcaddii 9aad ee Jaamacadda Hargeysa oo munaasibad qalin-jebin ah loo sameeyay
September 15, 2012 | Filed under: Wararkii ugu Dambeeyay | Posted by: Editor Hargeysa 15, September 2012 (SDN)- Madaxweynaha Somaliland, ayaa maanta ka qaybgalay munaasibad loo sameeyay dufcaddii 9aad ee ka qalinjebisa Jaamacadda Hargeysa.
Munaasibadda oo lagu qabtay xarunta Jaamacadda, waxa kale oo ka qaybgalay Shirguddoonka Baarlamaanka, madaxa xisbiyada siyaasadda, koox ka tirsan golaha wasiirada, maamulka iyo macaliinta Jaamacadda, ardayda qalinjebisay iyo martisharaf kale.
Ugu horayn, guddoomiyaha Jaamacadda Hargeysa Dr. Cabdi Gaas oo hadal ka jeediyay munaasibaddaas, waxa uu sheegay in dufcaddan 9aad tahay 637 arday oo ka qalinjebiyay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda.
“Ardaydani waxay ka qalin jabiyeen sagaal Kuliyadood oo ay ka mid yihiin maamulka iyo maareynta, Ganacsiga, caafimaadka, sharciga, daraasaadka Islaamiga ah iyo kuwo kale. Waxa ardaydan ku jira dhakhaatiirtii ugu badnayd ee ka qalin jabiyay jaamacadaha dalka, kuwaasoo tiradoodu gaadhayso 21 dhakhtar,”ayuu yidhi guddoomiyaha Jaamacada Hargeysa Dr. Cabdi Xuseen.
Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Samsam Cabdi Aadan, guddoomiyaha Jaamacadda Camuud Prof. Saleebaan Cabdi Guulleed iyo wasiirka Qorshaynta Qaranka Dr. Sacad Cali Shire oo hadalo ka jeediyay halkaas, ayaa muujiyay siday ugu faraxsan yihiin in ardaydii ugu tirada badnayd sannadkan ka qalinjebiso jaamacadda Hargeysa, waxayna kula dardaarmeen inay sii wataan waxbarashadooda.
Guddoomiyaha xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe oo isna hadal ka jeediyay munaasibadaas, waxa uu ka xog-waramay duruuftii lagu aasaasay jaamacadda, iyadoo xilligaas uu sheegay inuu ka mid ahaa shaqsiyaadkii laga talogeliyay, kana qaybqaatay hirgelinteeda.
Guddoomiyaha xisbiga Kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo isna hadal ka jeediyay munaasibadda, waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay qalinjebinta ardaydan tirada badan.
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo isna hadal ka jeediyay, waxa uu hambalyeeyay ardayda qalin-jebisay oo uu ku dardaaray inay dalkooda u shaqeeyaan. “Ardayda Jaamacadaha ka soo baxayaa waxay ka mid yihiin mustaqbalkii dalka. Dalkeenu wuu balaadhan yahay, waanu dihin yahay oo waa dal wax laga qaban karo oo mustaqbal wanaagsan leh, waxaanan mar kale bogaadinayaa oo aan dhiirigelinayaa ardayda qalin jabisay waalidkii iyo macalimiintii ku tabcay.”
Laakiin, Madaxweynaha iyo masuuliyiinta kale ee xukuumaddu kamay hadal qorsheyaal shaqo-abuur iyo jihayn loogu samaynayo ardayda tirada badan ee sannad kasta ka qalinjebinaya jaamacadda Somaliland.